Mae Pay Soh Elections API - Hack Challenge
Do you want to use your skills to make it easier for people to participate in the elections?
Join the MAEPAYSOH HACK CHALLENGE! The Challenge begins September 12, 2015!
The MaePaySoh Hack Challenge isacompetition to see who can build the best apps, websites & digital tools to help voters. We haveagreat API for developers to use which is full of information voters need to know. The best apps from the Hack Challenge will be promoted around the country, and prizes worth up to 30,000 USD will be available for the winning teams!
createRegister Hack Challenge
Hack Challenge FAQ
Q. What is the MaePaySoh Hack Challenge?
The MaePaySoh Hack Challenge isacompetition to see who can build the best apps, websites & digital tools to help voters. We haveagreat database for developers to use which is full of information voters need to know. The best apps from the Hack Challenge will be promoted and distributed around the country in the weeks before the election.
Q. Who can participate in the MaePaySoh Hack Challenge?
Talented developers, software engineers, and designers who want to:
Help voters access information about the elections
Work with other talented developers to build data-driven tech products
Win money & prizes, and see their product distributed around the country
Q. Do I have to be onateam in order to participate in the MaePaySoh Hack Challenge?
You are welcome to participate as an individual. However, we encourage people to join teams because teams have been most successful in past hackathons.
Q. What prizes will be available to the winners of the Hack Challenge?
The first place winner will receivea$4000 cash prize, and coveted membership to the Accelerate Track of FbStart, which entitles your startup or company to up to $80,000 in benefits from services including Facebook, Salesforce, Adobe and Github. Cash prizes will also be available for the second ($2000) and third ($1000) place teams, and additional prizes will be announced shortly.
Q. Where is the Hack Challenge?
Phandeeyar Innovation Lab is hosting the Hack Challenge in downtown Yangon, but you don’t have to be in Yangon to participate.
The first place winner will receivea$4000 cash prize, and coveted membership to the Accelerate Track of FbStart, which entitles your startup or company to up to 80,000 USD in benefits from services including Facebook, Salesforce, Adobe and Github. Cash prizes will also be available for the second ($2000) and third ($1000) place teams, and additional prizes will be announced shortly.
Q. Do I have to hack at Phandeeyar?
You can hack wherever you want. We'll have good internet, food, drinks andacool vibe, but you don't have to work at Phandeeyar
Q. How do I register to participate in the Hack Challenge?
Register for the Hack Challenge HERE!
Q. Do my teammates also need to fill out an application form?
Yes, please. Apply HERE.
Yes, but it would probably be more fun inateam. Don't worry if you're not inateam yet - we can help you find team mates. Just apply HERE
Q. I haveajob and can't work on this full time. Does that matter?
No. Most devs have jobs! This isatwo week challenge so people can work on this on the weekend (and/or evenings) or whenever they have spare time.
Q. Why is the Hack Challenge2weeks long?
This competition isabit different from previous hackathons that lasted 24-48 hours. We want to give you more time to design and build functioning apps that can be distributed to voters across the country.
Q. Can our company enter the Hack Challenge?
Yes. Companies are welcome to participate.
Q. Can I participate if I don't live in Yangon?
Q. How do I participate if I’m not in Yangon?
Join HERE, and we’ll make sure you have all the information you need to compete!
Q. What if I cannot come to Phandeeyar on Demo Day, Sunday September 27?
Demo Day is the opportunity for the top teams to present their apps to the judges. If you cannot be at Phandeeyar for Demo Day, you can find someone who can demo your app. Let us know if for any reason you cannot be in Yangon for Demo Day, and we’ll help you work this out.
Q. Does it matter if I've never participated ina"hackathon" or "hack challenge"?
No. Don’t worry, we'll explain everything.
Q. I don't know anything about the elections - can I still participate?
Yes! We have election experts available to explain how everything works and to answer your questions.
Q. What if I've never seen any election apps/websites before?
Don't worry - we've got lots of examples to inspire you.
မဲပေးစို့ Hack Challenge အကြောင်း မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းနှင့်အဖြေများ
မေး - မဲပေးစို့ Hack Challenge ဆိုတာဘာလဲ?
မဲပေးစို့ Hack Challenge ဆိုသည်မှာ မဲဆန္ဒရှင်များကိုကူညီရန် မည်သူသည် အကောင်းဆုံး apps, websites နှင့် digital tools ကို ဖန်တီးနိုင်သလဲဟု သိရှိစေရန်ကျင်းပပေးသည့် ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ မဲဆန္ဒရှင်များသိရန် လိုအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက် အပြည့်အစုံရှိသည့် database တစ်ခုကို developer များအသုံးပြုရန်အတွက် တည်ဆောက်ပေးထားပါသည်။ Hack Challenge မှ အကောင်းဆုံး apps များကို ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပခင်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ကြေညာပြီးဖြန့်ဝေသွားမည်ဖြစ်သည်။
မေး - မဲပေးစို့ Hack Challenge တွင် ဘယ်သူတွေ ပါနိုင်ပါသလဲ?
စွမ်းရည်ရှိ developer များ၊ software engineer များနှင့် ဒီဇိုင်နာများပါဝင်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်
ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို မဲဆန္ဒရှင်များရနိုင်ရန် ကူညီချင်သူများဖြစ်ရမည်။
အခြားစွမ်းရည်ရှိdeveloperများနှင့်အတူ လက်တွဲလုပ်ဆောင်ကာ dataအခြေခံသောနည်းပညာ ဆိုင်ရာ product များကိုဖန်တီးပြုလုပ်ချင်သူများဖြစ်ရမည်။
ငွေသားဆုများဆွတ်ခူးပြီး မိမိတို့ရေးခဲ့သည့် productများကို တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ဖြန့်ဝေခွင့်ပေးနိုင်သူများ ဖြစ်ရမည်။
မေး - မဲပေးစို့ Hack Challenge တွင် ပါဝင်နိုင်ရန်အတွက် အသင်းတစ်သင်းသို့ ဝင်ရမလား?
တစ်ဦးတစ်ယောက်အနေဖြင့်လည်း ဝင်ပြိုင်၍ ရပါသည်။ သို့သော် ဝင်ပြိုင်ရန် ဆန္ဒရှိသူများကို အသင်းဖွဲ့၍ ယှဉ်ပြိုင်ရန်တိုက်တွန်းအားပေးပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယခင်ကျင်းပခဲ့သော hackathon များတွင် အောင်မြင်မှုအများဆုံးရခဲ့သူများမှာအသင်းများမှဖြစ်ပါသည်။
မေး - Hack Challenge တွင်ပါဝင်ဖို့ ဘယ်လိုမှတ်ပုံတင်ရမလဲ?
Hack Challenge တွင်ပါဝင်ရန် MaePaySoh.org တွင် မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါသည်။
မေး - Hack Challenge က ဘယ်လောက်ကြာမလဲ?
ဤပြိုင်ပွဲသည် ယခင်ကလုပ်ခဲ့သည် ၂၄-၄၈ နာရီသာကြာသည့် hackathon များနှင့် အနည်းငယ်ကွဲ ပြားပါသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့မှ မဲဆန္ဒရှင်များထံ ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သော apps ကို ဒီဇိုင်း ဆွဲပြီး တည်ဆောက်ရန် ပြိုင်ပွဲဝင်သူများကိုအချိန်ပိုပေးလိုပါသည်။ Hack Challenge ကို စက်တင်ဘာလ (၁၂) ရက်နေ့ စနေနေ့ တွင် စတင်မည်ဖြစ်ပြီး စက်တင်ဘာလ (၂၇) ရက် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည်။
မေး - Hack Challenge တွင် အနိုင်ရသူတွေဟာ ဘယ်လိုဆုတွေရမလဲ?
ပထမဆုဆွတ်ခူးသူသည် ဒေါ်လာ ၄၀၀၀ ငွေသားဆုရမည်ဖြစ်ပြီး Accelerate Track of FbStart တွင် အသင်းဝင်ခွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။ အသင်းဝင်ခွင့်ရခြင်းဖြင့် သင်၏ startup သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် Facebook, Salesforce, Adobe and Githubတို့အပါအဝင် ဝန်ဆောင်မှုများထံမှ ဒေါ်လာ ၈၀၀၀၀ တန်သည်အထိအကျိုးအမြတ်များရနိုင်သည်။ ဒုတိယဆု အတွက် ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ နှင့် တတိယဆု အတွက် ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး နောက်ထပ် ဆုများကိုလည်း မကြာမီ ကြေညာပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
မေး - ဖန်တီးရာမှာဘဲနေပြီး hack လုပ်ရမှာလား?
မိမိနှစ်သက်ရာနေရာမှ hack လုပ်နိုင်ပါသည်။ ဖန်တီးရာမှာ အင်တာနက်ကောင်းကောင်းနှင့် စားစရာများထားရှိပေးမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဖန်တီးရာမှာဘဲနေပြီး hack လုပ်ရမည်ဟု မဆိုလိုပါ။
မေး - Hack Challenge တွင်ပြိုင်ပွဲဝင်ရန် ဘယ်လိုမှတ်ပုံတင်ရမလဲ?
Hack Challenge အတွက် ဤနေရာတွင် HERE မှတ်ပုံတင်ပါ။
မေး - ပြိုင်ပွဲဝင်အဖွဲ့သားအားလုံး လျှောက်လွှာဖြည့်ဖို့ လိုအပ်သလား?
လိုအပ်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် HERE ဖြည့်ပါ။
မေး - တစ်ဦးချင်းအနေနဲ့ ပါဝင်လို့ရပါသလား?
ရပါသည်။ သို့သော် အဖွဲ့နဲ့ဆိုရင်တော့ ပိုပျော်စ၇ာကောင်းပါသည်။ အကယ်၍ အဖွဲ့မရှိသေးလည်း စိတ်မပူပါနှင့်။ ပြိုင်ပွဲဝင်အဖွဲ့သားများရရှိလာအောင် ကူညီပေးပါမည်။ ဤနေရာတွင် HERE လျှောက်လွှာဖြည့်ပါ။
မေး - အလုပ်ရှိတဲ့အတွက် အချိန်ပြည့်မလုပ်နိုင်ပါ။ အဲဒီအတွက် ပြဿနာရှိနိုင်ပါသလား?
မရှိနိုင်ပါ။ Developersအများစုသည် အလုပ်လုပ်နေသူများဖြစ်ပါသည်။ Challenge မှုာနှစ်ပတ် ကြာမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ရုံးပတ်ရက်များနှင့် ရုံးဆင်းချိန်ညနေပိုင်းများ (သို့) အားလပ်သည့်အချိန်များတွင် လုပ်နိုင်ပါသည်။
မေး - Hack Challenge က ဘာကြောင့် နှစ်ပတ်ကြာတာလဲ?
ယခုတခေါက်တွင် ကျင်းပမည့်ပြိုင်ပွဲသည် ယခင်ကကျင်းပခဲ့သည့် ၂၄-၄၈ နာ၇ီကြာ hackathons များနှင့် ကွဲပြားမှုရှိပါသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့မှ မဲဆန္ဒရှင်များထံ ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သော apps ကို ဒီဇိုင်း ဆွဲပြီး တည်ဆောက်ရန် ပြိုင်ပွဲဝင်သူများကိုအချိန်ပိုပေးလိုပါသည်။
မေး - Hack Challenge မှာ ကုမ္ပဏီတွေကောပါဝင်လို့ ရသလား?
ရပါသည်။ ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
မေး - ရန်ကုန်မှာမနေရင်ရော ပါဝင်လို့ရပါသလား?
မေး - ရန်ကုန်မှာမနေရင် ဘလ်လိုပါဝင်ရမလဲ?
ဤနေရာတွင် HERE ကြည့်ပါ။ သင်လိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက်အားလုံးရရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။
မေး - အကယ်၍ တီထွင်ထားတဲ့ productတွေပြတဲ့နေ့ (Demo Day) စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ဖန်တီးရာကို မလာနိုင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ?
Demo Day ဟာအကောင်းဆုံးအဖွဲ့တွေကတီထွင်ထားတဲ့ Productတွေကို ဒိုင်လူကြီးတွေရှေ့မှာပြဖို့ အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ Demo Dayမှာ ဖန်တီးရာကိုမလာနိုင်ခဲ့ရင် ကိုယ်တီထွင်ထားတဲ့ app ကိုပြပေးဖုို့ တစ်ခြားတစ်ယောက်ကိုရှာပါ။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် Demo Dayမှာ ရန်ကုန်မှာမရှိခဲ့ရင် ကြိုတင်အသိပေးထားပါ။ အဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားပေးပါ့မည်။
မေး - ယခင်ကကျင်းပတဲ့ "hackathon" (သို့) "hack challenge" တွေမှာတခါမှမပါဝင်ခဲ့ဘူးရင် ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ?
ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ စိတ်မပူပါနဲ့။ အားလုံးကိုရှင်းပြပေးမည်ဖြစ်သည်။
မေး - ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘာမှမသိပါဘူး။ ပြိုင်ပွဲဝင်လို့ရနိုင်မလား?
ရပါသည်။ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေမှနေ၍ သင်တို့သိချင်သောမးခွန်းများကိုဖြေရန် အဆင်သင့်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။
မေး - တခါမှ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ app/websites တွေကိုမမြင်ဘူးခဲ့ရင် ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ?
စိတ်မပူပါနှင့်။ သင်တို့အတွက် နမူနာတွေအများကြီးပေးပါမည်။